Kunze kweWPC Wall Cladding - China Kunze WPC Wall Cladding Mutengesi, Factory -HengSu Edging
musha » Products » WPC Material » WPC Wall Panels
Kunze kweWPC Wall Cladding
Nzvimbo yedu yekunze wpc kurongedza mabhodhoro yakakwana kune chero ipi zvayo yebhizimisi, yeimba, yekuvaka itsva kana yekugadzirisa basa rekugadzirisa seprojekti-yakagadzikana kune imwe yemapuranga akavhara matanda.
Yakagadzirirwa kubva pakusanganiswa kwehuni nemapurasitiki, kugoverwa kwechikwata kunopa nguva yakatarisa yekugadzirisa yakasarudzwa iyo inoshandura zvakajeka kutaridzika kwechivako chipi zvacho.Ichadzivirira chivakwa chako uye chinopedza kwemakore mazhinji mumamiriro ese emamiriro ekunze.
Inotarisa uye inonzwa sehuni chaiyo asi matambudziko mashoma ematanda;
100% kudzoka zvakare, eco-friendly, kuchengetedza masango emasango;
Misi, Mvura inopesana, isiri yakaora, inopupurirwa pasi pemvura yemvura;
Barefoot ushamwari, anti-slip, zvishoma kudengenyeka, kuderera kwehondo;
Inoda kwete kuvepa, kwete glue, kushandiswa kwepasi;
Kupikisa kwemamiriro ekunze, kunokonzerwa kubva pakusiya 40 kusvika ku 60 ° c;
Zviri nyore kuisa uye kuchenesa, mari shoma yebasa.
zera: 180x10mm, 150x16mm, 150x20mm, 100x16mm
1.Kuri kunze wpc kurongedza kumadziro kweruzhinji kwakanaka?
Hongu, nokuti WPC haingasviki, kuputika kana kupera, iyo inoshamisa inoderedza kuparadza kwemhepo yekugadzirisa uye kugadzirisa uye kunopedza kushandiswa kwemajaya kwepakati pekuvhenekera kunokonzera mhepo, zvipfeko uye mashizha.
2.Kwo panze wpc kurongedza rusvingo kunopera muvara?
Zvimwe zvinhu zvakagadziriswa kuVV uye zvimwe zvinokonzera mamiriro okunze zvicharamba. WPC masvingo ekugadzirisa mararamiro akabatanidzwa nehupamhi hwepamusoro michina uye UV-inhibiting pigments kuti kuderedzwa kupera uye kubudisa michina yakafanana nemuvara.
3 Ndeipi iyo inokosha wpc kurongedzwa kwemadziro ekuisa mashizha?
Keel, simbi isina tsvina, mbambo, kuwedzera kwekona, nechokumucheto skirting.
4. Pane kutengesa mari shoma kutumira kunyika yedu here?
Nokuda kwechidiki, kuratidza kuchave kwakanakisisa.Kunyange purogiramu yakawanda, nzira yekufamba kwegungwa ndiyo yakanaka asi inotora nguva yakawanda.
5. Kunze wpc kuvhara rusvingo kune waranti?
Fireproof WPC Yakasimudzirwa Tile Tiles
Wood Wood Composite Decking